က​လေးမရ​အောင်​ ဘယ်​လိုတား​ဆေး သုံးရမလဲ - Shwengwe Games
က​လေးမရ​အောင်​ ဘယ်​လိုတား​ဆေး သုံးရမလဲ
August 10, 2019 Shwengwe Games Health 0
သားသမီးဆိုတာရတနာပေမယ့်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့အချိန်မှာရလိုက်ရင်တော့ ဒုက္ခတစ်ခုပါပဲ။မလိုချင်လို့ဖျက်ချရင်လဲအန္တရာယ်များတဲ့အတွက်ကိုယ်ကလေးယူဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးရင်တားထားဖို့လိုပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာသန္ဓေတားဖို့အတွက်နည်းလမ်းတွေများပြားလှပါတယ်။
ကွန်ဒုံးကနေအစပြုလို့လက်မောင်းတွင်းထည့်တဲ့ပစ္စည်းအထိ ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးပါပဲ။ဒါပေမဲ့နည်းလမ်းတိုင်းဟာလူတိုင်းနဲ့ သင့်တော်တာမဟုတ်ပါဘူး။သန္ဓေတားတော့မယ်ဆိုရင်သန္ဓေတားနည်းနဲ့အကျိုးနဲ့အပြစ်ကို ချိန်ဆပြီးမိမိနှင့်အသင့်တော်ဆုံးကို ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
>> ကလေး ဘယ်အချိန်ယူမှာလဲ?
ဘယ်လောက်ကြာကြာသန္ဓေတားခြင်းလည်းဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လည်းမူတည်ပြီးတော့ စဉ်းစားရမှာပါ။မကြာခင်အချိန်အတွင်းမှာ ကလေးယူဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုပါတော့ ဖြတ်ရလွယ်ပြီးအချိန်တိုအတွင်းကလေးပြန် ရနိုင်တဲ့ကွန်ဒုံး၊ဒါမှမဟုတ်တားဆေးကတ်တွေကသင့်လျော်ပါတယ်။
IUCD ကဲ့သို့ သားအိမ်တွင်းထည့်ပစ္စည်းတွေကတော့ ရေရှည် သန္ဓေတားချင်သူတွေအတွက်အိုကေစေမှာပါ။သားကြောအပြီးဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီး နောက်မှကလေး ပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်အခက်တွေ့နိုင်တာမို့အဆင်ပြေလှတဲ့နည်းလမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကလေးများတဲ့မိသားစုဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့။
>> ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမှာပါ့မလား?
ဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခံနိုင်ရည်ကိုလည်း ထည့်စဉ်းစားရမှာပါ။အထူးသဖြင့် ဟော်မုန်းပါတဲ့တားဆေးတွေကြောင့်ပျို့အန်တာ၊ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊အသားအရေ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းစတဲ့ဆိုးကျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။အချို့ဆေးတွေကရာသီကမောက်ကမ ဖြစ်စေတာကြောင့်သန္ဓေတားနည်းတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင်​ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာဝန်နှင့်​ဆွေးနွေးပါ။
>> နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ရော လိုက်ရဲ့လား?
ပဋိသန္ဓေတားတဲ့နည်းလမ်းတွေဟာ ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်း​သေချာလိုက်နာမှသာ ထိရောက်မှုအပြည့်အ၀ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မေ့တတ်တဲ့အမျိုးသမီးအတွက်​နေ့စဉ်အချိန်မှန်မှန် သောက်ရမယ့်သန္ဓေတားဆေးကအဆင်ပြေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကွန်ဒုံးကလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။
လိင်ဆက်ဆံချိန်တိုင်း အသုံးပြုဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် အစကတည်းကတခြားနည်းလမ်း (IUD, ထိုးဆေး) ရွေးချယ်ပါ။​ဆေးလိပ်သောက်တတ်သူဖြစ်ပါကကိုယ်ဝန်ဆောင်ဆေးကဒ်ကို ရွေးချယ်ပါက သွေးခဲနှုန်း၊နှလုံးရောဂါဖြစ်နှုန်းကိုမြင့်တက်စေတာကြောင့်​ဆေးလိပ်ဖြတ်မလား၊တခြားနည်းလမ်း ပြောင်းသုံးမလားစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
>> လိင်ဆက်ဆံဖော် တစ်ယောက်ထက် ပိုနေလား?
လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တဲ့ရောဂါတွေမရအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့တစ်ခုတည်းသော အရာဟာကွန်ဒုံးဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်း/ချစ်သူဟာလိင်ဆက်ဆံဖော်များသူတွေ၊ တစ်ယောက်နှင့်အထက်ရှိသူဆိုအကာအကွယ်ပစ္စည်းသုံးသင့်ပါတယ်။မမေ့စေချင်ပါဘူး။
ကိုယ့်မှာ​ရောဂါရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်စဉ်းစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လေဖြတ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါရာဇ၀င်ရှိသူတွေ၊ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါရှိသူတွေ၊ရင်သားကင်ဆာ ဒါမှမဟုတ်သားအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်ဖူးသူတွေက ဟော်မုန်းပါဝင်တဲ့သန္ဓေတားဆေးတွေ သုံးလို့မသင့်ပါဘူး။ဒါကြောင့်နည်းလမ်းမရွေးချယ်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရောဂါရာဇ၀င်နှင့်ပတ်သက်ပြီးဆရာဝန်ကို ပြောပြဖို့လိုပါတယ်။
သန္ဓေတားနည်းတစ်ခုချင်းဆီတိုင်းမှာအားသာချက်၊အားနည်းချက်ကိုယ်စီရှိပြီး ဈေးကြီးတိုင်းလည်းကိုယ်နှင့်အဆင်ပြေချင်မှ ပြေတာပါ။မိမိတတ်နိုင်တဲ့​ငွေကြေးပမာဏတိုင်းတာပြီးသင့်လျော်တဲ့သန္ဓေတားနည်းကို​ရွေးချယ်ပါ။တချို့သန္ဓေတားနည်းတွေကကုန်ကျစရိတ်များပေမယ့်အာနိသင်ပြချိန်နဲ့ ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တစ်လကုန်ကျစရိတ်က မပြောပလောက်ပါဘူး။
>> ဘယ်လောက် ထိရောက်မှုရှိလဲ?
Dr. Htet Htet Aung (www.drmyanmar.com)
သားသမီးဆိုတာရတနာပမေယျ့အဆငျသငျ့မဖွဈသေးတဲ့အခြိနျမှာရလိုကျရငျတော့ ဒုက်ခတဈခုပါပဲ။မလိုခငျြလို့ဖကျြခရြငျလဲအန်တရာယျမြားတဲ့အတှကျကိုယျကလေးယူဖို့အဆငျသငျ့မဖွဈသေးရငျတားထားဖို့လိုပါတယျ။ ယနခေ့တျေမှာသန်ဓတေားဖို့အတှကျနညျးလမျးတှမြေားပွားလှပါတယျ ။
ကှနျဒုံးကနအေစပွုလို့လကျမောငျးတှငျးထညျ့တဲ့ပစ်စညျးအထိ ရှေးခယျြစရာတှအေမြားကွီးပါပဲ။ဒါပမေဲ့နညျးလမျးတိုငျးဟာလူတိုငျးနဲ့ သငျ့တျောတာမဟုတျပါဘူး။သန်ဓတေားတော့မယျဆိုရငျသန်ဓတေားနညျးနဲ့အကြိုးနဲ့အပွဈကို ခြိနျဆပွီးမိမိနှငျ့အသငျ့တျောဆုံးကို ရှေးခယျြရမှာဖွဈပါတယျ။အကောငျးဆုံး ရှေးခယျြနိုငျဖို့ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှနေဲ့တိုငျပငျဆှေးနှေးနိုငျပါတယျ။
>> ကလေး ဘယျအခြိနျယူမှာလဲ?
ဘယျလောကျကွာကွာသန်ဓတေားခွငျးလညျးဆိုတဲ့အခကျြပျေါလညျးမူတညျပွီးတော့ စဉျးစားရမှာပါ။မကွာခငျအခြိနျအတှငျးမှာ ကလေးယူဖို့အစီအစဉျရှိတယျဆိုပါတော့ ဖွတျရလှယျပွီးအခြိနျတိုအတှငျးကလေးပွနျ ရနိုငျတဲ့ကှနျဒုံး၊ဒါမှမဟုတျတားဆေးကတျတှကေသငျ့လြျောပါတယျ။
IUCD ကဲ့သို့ သားအိမျတှငျးထညျ့ပစ်စညျးတှကေတော့ ရရှေညျ သန်ဓတေားခငျြသူတှအေတှကျအိုကစေမှောပါ။သားကွောအပွီးဖွတျပဈလိုကျပွီး နောကျမှကလေး ပွနျလိုခငျြတယျဆိုရငျအခကျတှနေို့ငျတာမို့အဆငျပွလှေတဲ့နညျးလမျးတော့မဟုတျပါဘူး။ကလေးမြားတဲ့မိသားစုဆိုရငျတော့တဈမြိုးပေါ့။
>> ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှကေ ကိုယျနဲ့ အဆငျပွမှောပါ့မလား?
ဆေးရဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးခံနိုငျရညျကိုလညျး ထညျ့စဉျးစားရမှာပါ။အထူးသဖွငျ့ ဟျောမုနျးပါတဲ့တားဆေးတှကွေောငျ့ပြို့အနျတာ၊ကိုယျအလေးခြိနျတကျခွငျး၊စိတျဓာတျကခြွငျး၊အသားအရေ ပွောငျးလဲခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျးစတဲ့ဆိုးကြိုးတှခေံစားရနိုငျပါတယျ။အခြို့ဆေးတှကေရာသီကမောကျကမ ဖွဈစတောကွောငျ့သန်ဓတေားနညျးတဈခုခုကို ရှေးခယျြတော့မယျဆိုရငျဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှနေဲ့ပတျသကျပွီးဆရာဝနျနှငျ့ဆှေးနှေးပါ။
>> နထေိုငျမှုပုံစံနဲ့ရော လိုကျရဲ့လား?
ပဋိသန်ဓတေားတဲ့နညျးလမျးတှဟော ညှနျကွားထားတဲ့အတိုငျးသခြောလိုကျနာမှသာ ထိရောကျမှုအပွညျ့အဝရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မတေ့တျတဲ့အမြိုးသမီးအတှကျနစေ့ဉျအခြိနျမှနျမှနျ သောကျရမယျ့သန်ဓတေားဆေးကအဆငျပွနေိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ကှနျဒုံးကလညျး ထိုနညျးလညျးကောငျးပါပဲ။
လိငျဆကျဆံခြိနျတိုငျး အသုံးပွုဖို့အဆငျမပွဘေူးဆိုရငျ အစကတညျးကတခွားနညျးလမျး(IUD, ထိုးဆေး)ရှေးခယျြပါ။ဆေးလိပျသောကျတတျသူဖွဈပါကကိုယျဝနျဆောငျဆေးကဒျကို ရှေးခယျြပါက သှေးခဲနှုနျး၊နှလုံးရောဂါဖွဈနှုနျးကိုမွငျ့တကျစတောကွောငျ့ဆေးလိပျဖွတျမလား၊တခွားနညျးလမျး ပွောငျးသုံးမလားစဉျးစားရမှာဖွဈပါတယျ။
>> လိငျဆကျဆံဖျော တဈယောကျထကျ ပိုနလေား?
ကိုယျ့မှာရောဂါရှိတယျဆိုတာကိုလညျးထညျ့စဉျးစားဖို့လိုအပျပါတယျ။ လဖွေတျရောဂါ၊ အသညျးရောဂါရာဇဝငျရှိသူတှေ၊ ခေါငျးတဈခွမျးကိုကျရောဂါရှိသူတှေ၊ရငျသားကငျဆာ ဒါမှမဟုတျသားအိမျကငျဆာဖွဈဖူးသူတှကေ ဟျောမုနျးပါဝငျတဲ့သန်ဓတေားဆေးတှသေုံးလို့မသငျ့ပါဘူး။ဒါကွောငျ့နညျးလမျးမရှေးခယျြခငျမှာကိုယျ့ရဲ့ရောဂါရာဇဝငျနှငျ့ပတျသကျပွီးဆရာဝနျကို ပွောပွဖို့လိုပါတယျ။
သန်ဓတေားနညျးတဈခုခငျြးဆီတိုငျးမှာအားသာခကျြ၊အား နညျးခကျြကိုယျစီရှိပွီး ဈေးကွီးတိုငျးလညျးကိုယျနှငျ့အဆငျပွခေငျြမှ ပွတောပါ။မိမိတတျနိုငျတဲ့ငှကွေေးပမာဏတိုငျးတာပွီးသငျ့လြျောတဲ့သန်ဓတေားနညျးကိုရှေးခယျြပါ။တခြို့သန်ဓတေားနညျးတှကေကုနျကစြရိတျမြားပမေယျ့အာနိသငျပွခြိနျနဲ့ ပွနျတှကျကွညျ့မယျဆိုရငျတဈလကုနျကစြရိတျက မပွောပလောကျပါဘူး။
>> ဘယျလောကျ ထိရောကျမှုရှိလဲ?
အသည်း ပြည်တည်ခြင်း အကြောင်း သိထားသင့်​​သော အချက်​များ
နာမညျကြျောကုမ်ပဏီကွီးတဈခုရဲ့ လူလညျကမြှုတဈခုကိုအမြားသိအောငျဖျောထုတျခဲ့တဲ့ ဖှေးဖှေး
မိဘတှကေို ပွနျတရားစှဲဆိုတဲ့ဇာတျလမျးအဖွဈ နာမညျကွီးခဲ့တဲ့ “Capernaum” ရုပျရှငျကွောငျ့ ဒုက်ခသညျဘဝက လှတျ မွောကျခဲ့တဲ့ ဇိမျး
ယနနေံ့နကျ၅နာရီမှာ အပွီးငွိမျးသတျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈတဲ့ မန်တလေးမွို့ရှိရတနာပုံဈေး Sky Walkမီးလောငျမှု